Ike hydraulic: ọrụ, uru na ọghọm | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Portillo nke German | | ike hydraulic
Taa, anyị bịara ikwu maka ume ọkụ dị n'etiti ndị a na-ejikarị eme ihe. Ọ bụ ihe ike hydraulic. Ọ bụ ụdị nke ọcha ume nwee ike ịgbanwe ikike ndọda ike nke mmiri nwere ike eletrik. N'ebe a, anyị ga-akọwa ọkwa nke otu otu esi ewepụta ike a yana ihe emere iji were ya.
You chọrọ ịmatakwu banyere hydropower? Naanị ị ga-anọgide na-agụ 🙂
1 Kedu ihe bụ ike hydraulic?
2 Kedu ka o si arụ ọrụ?
3 Plantslọ hydroelectric na-akụpụta
4 Efere mmiri
5 Ebe a na-enye ọkụ eletrik
6 Akụkọ banyere mmiri
Kedu ihe bụ ike hydraulic?
Ka anyị malite site n’igosi ọzọ na ọ bụ ihe ohuru ohuru ma dikwa ocha. Ekele ya, enwere ike ịmepụta ọkụ eletrik na-enweghị mmetọ ma ọ bụ mebie ihe ndị sitere n'okike. Ike a na-anwa igbanwe ike ndọda nke nwere mmiri nwere n'ime mbuli site na ike ọgbụgba iji merie ọdịiche dị n'ịdị elu. Enwere ike iji igwe eji arụ ọrụ rụọ ọrụ nke ọma iji megharịa igwe nke turbine iji mepụta ike eletriki.
Typedị ike a dị nnọọ ọcha n'ihi na ọ na-abịa site na osimiri na ọdọ mmiri. Ihe okike nke mmiri mgbochi mmiri na nke a na-amanye ndị mmadụ amanye emeela ka ohere ịnweta ike bawanye. Nke a bụ n'ihi Ọ nwere ike ịchekwa nnukwu mmiri ma jiri ya na-emepụta ike.
E nwere ọtụtụ ụdị nke ike hydroelectric ike. A hụrụ nke mbụ n’ógbè ndị bụ́ ugwu ugwu. Iji ohere dị elu ha lekwasịrị anya na-awụli elu nke ọdịda. Otherdị osisi nke ọzọ bụ mmiri dị n ’mmiri ma were ha nnukwu mmiri nke mmiri mmiri nke meriri obere esemokwu na ịdị elu. Enwere ike ịsị na otu na - ewepụta ike karịa obere oge na nke abụọ na - ewepụta obere obere.
A na-ebugharị mmiri dị n’ọdọ mmiri ma ọ bụ befere mmiri si na paịpụ na-agbada. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe ike ya nwere nrụgide na Ike kinji ekele onye nkesa na tobaim.
A na-agbanwe ike igwe site na igwe ọkụ eletrik na-ekele maka ihe nke nnabata electromagnetic. Nke a bụ otu esi enweta ọkụ eletrik. E guzobela ebe mgbapụta mgbapụta iji chekwaa ike wee si otú a nwee ya n'oge enwerekarị mkpa. Dika o kwere omume inyocha, usoro nchekwa nke ume ohuru bu mmachi maka oganihu ya.
Plantslọ hydroelectric na-akụpụta
N'ime osisi hydroelectric na-agbapụta mmiri, a na-agbanye mmiri n'ime tankị na-eji ike emepụtara na-adịghị mkpa n'otu ntabi anya. N'ụzọ dị otu a, n'ehihie mgbe ọkụ eletrik na-achọkarị, enwere ike inye mmiri ọzọ. Sistemụ mgbapụta nwere uru na ha na-ekwe ka ike chekwaa n'oge ụfọdụ nke nnweta iji mee ihe n'oge mkpa.
Agbanyeghị na ọ nwere ọtụtụ elele na ọ bụ ike na-adịghị emetọ emetọ, iwu ọdọ mmiri na nnukwu bekee na-ebute mmetụta gburugburu ebe obibi. Ọ bụghịzi iwu mmiri, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọdọ mmiri, idei mmiri nke nnukwu ala, wdg. Ha na emebi emebi onodu gburugburu obibi.
A na-eji ya achịkọta mmiri nke osimiri. Ọ bụ efere e ji aka mee nke na-echekwa mmiri. Isi ihe ya bụ mmiri mmiri. N'ihi mmiri mmiri ahụ, a na-enweta elu dị mkpa ka e wee nwee ike iji mmiri mee ihe mgbe e mesịrị n'ihi ọdịiche dị na ọkwa.
Site na mmiri gbamgbam rue ebe ebe ndi na enye oria di, enwere uzo ozo. Ebumnuche ya bụ ịkwado ọsọ ọpụpụ nke eriri turbine. Nmeghe mbu kariri ma nwekwaa uzo iji nwekwuo ike nke mmiri na-aputa.
Ebe a na-enye ọkụ eletrik
Osisi ike bu nke nwere otutu ihe eji eme hydraulic arụ ọrụ nke etinyere n'ọnọdụ ụfọdụ. Igwe ndị ahụ nwere ebumnobi nke ịdị njikere iji nweta mmepụta ọkụ eletrik site na ike hydraulic. A na-ebugharị mmiri ahụ na otu turbines ma ọ bụ karịa na-agbanwe site na nrụgide nke mmiri. A na-ejikọta turbine ọ bụla na alternator nke na-ahụ maka ịgbanwe ntụgharị ntụgharị n'ime ike eletriki.
Otu ihe ọghọm ewezuga mmetụta gburugburu ebe obibi nke okike nke mmiri ahụ gbopụtara bụ na ọgbọ nke ume anaghị akwụsị akwụsị. A ghaghi iburu n'uche na mmeputa nke ume ohuru na-adabere na okike. Ya mere, mmiri a na-esi na bezin mmiri ahụ ga-adabere, n'aka nke ya, nke ọchịchị na osimiri. Ọ bụrụ na mmiri ozuzo na mpaghara pere mpe, ọgbọ nke ume agaghị enwe ọrụ.
Omume ụfọdụ mba na-eme bụ ịwụnye mmiri n'ọdọ mmiri hydroelectric n'abalị. Emere nke a n'ihi na enwere ike na ike hydraulic echekwara n'ụbọchị ahụ ka ejiri ya rụọ ọrụ ọzọ. Mgbe ọchịchọ ọkụ eletrik dị elu, yabụ ọnụahịa. Yabụ inweta uru net ma chekwaa ike eletrik.
Akụkọ banyere mmiri
Ndị mbụ jiri ụdị ume a bụ ndị gris na ndị romans. Na mbu ha jiri ume mmeghari ohuru mee ka igwe ebe miri ghaa oka. Ka oge na-aga, ụlọ ọrụ na-agbanwe wee banye na wiilị mmiri malitere iji ike mmiri nwere.
Ná ngwụsị nke oge a na-emepechabeghị emepe ụzọ ndị ọzọ ejiri mee ihe ike hydraulic. Ọ bụ maka hydraulic wiil. Ejiri ha mee ihe maka mmiri nke ubi na maka mgbake nke ebe apiti. A na-eji wiilụ mmiri ahụ eme ihe taa na igwe igwe na maka imepụta ọkụ eletrik.
Gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke abụọ wiilị mmiri gbanwere na turbine mmiri. Ọ bụ igwe eji arụ castor n’elu axle arụ ya. Site na teknụzụ ọhụụ ọ bịara zue oke ma rụọ ọrụ.
Akụrụngwa ahụ na-emeziwanye na arụmọrụ nke ntụgharị nke ikike ike nke mmiri n'ime ike ntụgharị nke ịtụgharị ma tinye ya na okporo.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwegoro ike ịmụtakwu ihe banyere ume ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » ike hydraulic » Ike hydraulic